गुल्मी समाचार – MeroJilla.com
सूचना दिवसको दिन नगरप्रमुख र सिडियोलाई ज्ञापनपत्र Sunday, August 19th, 2018
सन्धिखर्क- ११ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस ‘सुचना हाम्रो अधिकार, सुशासन र विकासको आधार, कुनै पनि सार्वजनिक सरोकार, थाहा पाउने नागरिकको अधिकार’ भन्ने मुल नाराका साथ आईतबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईएको छ । दिवसको दिन एकीकृत ग्रामीण विकास समाज अर्घाखाँचीद्धारा गठित सुशासन प्रवद्र्धनका निम्ती जिल्ला स्तरीय नागरिक सञ्जालले सन्धिखर्क नगरपालिका प्रमुख कमलप्रसाद भुसाल र..
पहिरोका कारण गुल्मीको मुसिकोट थाम मा २ घर विस्थापित, दर्जनौ घर जोखिममा Saturday, July 28th, 2018
कमल पौडेल गुल्मी १२ साउन । भञ्ज्याङ पौदी अमराई नेटा दर्लिङ गंगरे निर्माणाधिन सडक अन्तरगतको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. १ को थाम क्षेत्रमा पहिरो खस्दा दर्जनौं घरहरु जोखिममा परेका छन् । पहिरोका कारण उपल्लो थाम का २ घर पूर्ण रुपमा विस्थापित भएका छन्। मोटरवाटो का कारण पहिरो खस्दा शिवलाल विकको ८ जनाको परिवार र गोपाल कुमालको २ जनाको परिवार विस्थापित भएको हो। उनिहरु घर छोडि..
प्रविधिको विकाससँगै संकटमा पानीघट्ट Sunday, January 7th, 2018
गुल्मी,२३ पुस। कुनै समय कुटानी पिसानीका लागि महत्वपूर्ण मानिएको पानीघट्ट प्रविधिको विकाससंगै संकटमा पर्दै जान थालेको छ । पानीको माध्यमद्वारा संचालन गरिने पानीघट्ट ओझेलमा परेपछि संचालक र उपभोक्ता दुवैलाई चिन्ता परेको छ । मकै, कोदो, जौ, गहुँ, फापर पिस्न प्रयोग गरिने पानीघट्ट दुर्लभ बन्दै गएको मालिका गाउँपालिका ८ का कृष्ण घिमिरेले बताए । ‘मेसिनमा भन्दा झाँतो तथा पानीघट्टमा..
गुल्मीमा डोजरले पल्टाएको ढुंगा लागेर एक जनाको मृत्यु Tuesday, November 14th, 2017
गुल्मी, कात्तिक २८ । गुल्मीमा डोजरले पल्टाएको ढुंगा लागेर एक जनाको ज्यान गएको छ । मंगलबार बिहान रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नं. ४ अर्खले बस्ने ३५ वर्षका रामबहादुर दर्लामीको भाडागाउँको मोटरबाटो खन्ने क्रममा डोजरले पल्टाएको ढुंगा लागेर ज्यान गएको हो । जिल्लामा एक महिनाको अन्तरालमा तीनवटा दुर्घटना भएका छन् । अर्खले नजिकै रैँदी भन्ने स्थानमा पनि केकुलेको मोटरबाटो खनेको ठाँउबाट..
गुल्मीमा माइक्रोबस दुर्घटना, ८ जनाको मृत्यु, ५ घाइते Monday, October 30th, 2017
गुल्मी, १३ कात्तिक । बुटवलबाट गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास आउँदै गरेको एक यात्रीबहाक माइक्रोबस सोमबार गुल्मीको बीरवासमा दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु भएको छ । ७ जनाको घटनास्थलमा र उपचारका लागि पाल्पा लैजानेक्रममा थप एकजनाको मृत्यु भएको हो । बा४ख ५५०१ नम्बरको माइक्रोबस गुल्मी–दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर–४ मा सडकबाट करिब ३०० मिटर तल खसेको छ । दुर्घटनामा अरु पाँचजना घाइते..
चिनकोे अनुसन्धान विकास केन्द्रको उच्च स्तरीय टोली सहितको टोलीले गुल्मी पौदिक्षेत्रको अवलोकन Saturday, October 14th, 2017
कमल पौडेल बागलुङ (खर्वाङ) २८ असोज । चिनको राज्य सभाको मातहतको अनुसन्धान विकास केन्द्रको उच्च स्तरीय टोली सहित त्रिवि वनस्पति केन्द्रिय विभागको टोलीले आज गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. १ भर्मचौर लगाएतका स्थानमा अनुगमन तथा कृषि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ। मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. १ घर भई हाल चिनमा अध्ययन गर्दै आउनुभएका दामोदर भुसालको समन्वयमा सो टोली त्यस क्षेत्रमा..
दशक बित्दासमेत गुल्मेलीको जहाज चढ्ने सपना अधुरै Monday, October 9th, 2017
गुल्मी २३ असोज । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–५ का खिमराज अधिकारीको दशैमा जहाज चढेर घर फर्कने ठुलो इच्छा थियो । दसैंमा धुले उडान हुने खबरले उनी मात्र उत्साहित थिएनन । मुग्लिङ्ग र सिद्धबाबाको दुर्दशा भोगेका धेरैको मन चंगा थियो । तर, सदरमुकाम नजिकै सिमीचौरमा निर्माणधिन अवस्थामा रहेको बिमान स्थलको कामले समयमै गति लिएन । जसका कारण धेरैको जहाज चढ्ने आशा निराशामा परिणत भयो ।..
अर्घाखाँचीको मालारानीमा बस दुर्घटना, २ को मृत्यु,थप विवरण आउन बाँकी Friday, October 6th, 2017
गुल्मी, २० असोज। अर्घाखाचीको मालारानी गाउँपालिका ३ मा यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएको छ । मालारानी गाउँपालिकाको डाडाँकटेरीवाट बुटवलका लागि छुटेको लु १ ख ७५१८ नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा परि घटनास्थलमै २ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय बावुराम खनाले जानकारी दिए । बसमा ४० भन्दा बढी यात्रुहरु रहेको बताइएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय खनको प्रहरी टोली र स्थानीयले..
रेसुंगा गुल्मीका वडा सदस्य विस्फोटक पदार्थसहित पक्राउ Sunday, September 10th, 2017
काठमाडाैं, २५ भदाै । गुल्मी प्रहरीले विस्फोटक पदार्थसहित रेसुंगा नगरपालिकाका निवाचित वडा सदस्यलाई पक्राउ गरेको छ । लु ३२ प ६६०३ नम्बरको मोटरसाईकलमा राखेर तम्घास ल्याउँदै गर्दा प्रहरीले ३३ थान एक्सपोलोसिभ डेटोनेटर, चार थान सुतली बम, एक किलोग्राम बारुद र केही थान सेफ्टिफ्यूजलगायत सामाग्रीसहित रेनपा ८ का निर्वा्चित वडा सदस्य ताराबहादुर श्रीसलाई पक्राउ गरेको हो..
मुसिकोट नगरपालिकाद्धारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक Wednesday, August 9th, 2017
अनिश शर्मा गैरे, वामी गुल्मी ।। श्रावण २५ गते ।। मुसिकोट नगरपालिकाले आज नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, सस्ंथागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन गरी ५ प्रकारका कार्यक्रमहरु यो आर्थिक बर्षको लागि सार्वजनिक गरीएको हो । आर्थिक बिकासमा टोल वस्ती सुधार कार्यक्रम मार्फत गरिवी र पछौटेपन, असुरक्षित र..
पर्बत चुवाका शर्मा सहित ३ जना नेपालीको भारतको काश्मिरमा मृत्यु Wednesday, May 24th, 2017
स्विटजरल्याण्ड । भारतीय सेनामा कार्यरत ३ नेपाली गोर्खा सैनिकको काश्मिरमा मृत्यु भएको छ । श्रीनगरस्थित रक्षा प्रवक्ता राजेश कालियालाई उद्धृत गर्दै दुई हवल्दार र एक राइफलम्यानको मृत्यु भएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । मृत्यु हुनेमा पर्वतका राइफलम्यान रबिन शर्मा गुल्मी काराङतुङ गाउँ घर भएका हवल्दार डमरबहादुर पुन र कास्की घर भएका हवल्दार वर्षीय गिरिश गुरुङ रहेको..